Khubaro khibrad leh oo kaacaawin kara baahi kasta oo shaqo
Anaga ayaa kucaawinayna. Khubaradeena CareerForce waxay diyaar uyihin inay kaataageeraan baahi kasta oo shaqo oo aad qabto. Waxaa noojooga koox khubaro ah kuwaasoo kajawaabi kara su'aalahaaga, kugu xiri kara ilaha adeegyada la aruurshay iyo macluumaadka ama kugu hagi kara inaad lahaato xirfad soojiidasho badan, hormar iyo joogtaynta guushaada.
Xeelada shaqaalaha—Waxaan abuurnaa xalal hal abuur leh oo shaqaale anagoo isku aadinayna ilaha, fududaynaya wada shaqaynta kana faaiidaysanayna khibrada qaybaha warshadaha shaqada si aan uhormarino sinaanta iyo kobaca dhaqaalaha.
Shaqaalaysiinta naafada—Waxan khubaro kunahay shaqada naafada waxaana bixinaa ilo iyo isbahaysi xeeladeed si aan usoo bandhigno xirfada shaqo ee dadka naafada ah.
Qiimaynta suuqa shaqaalaha ee gobalka—Waxaan bixinaa noocyadii ugu danbeeyay ee xogaha, xaaladaha dhaqaalaha iyo wararka suuqa shaqaalaha anagoo bixinayna khibrad laheli karo, adeegyada qiimaynta, tababarka iyo bandhigyada mawduucyo gaar ah.
Caawimaada shaqale cayrinta—Waxaan kugu hagi karnaa hanaanka adag ee shaqo kacayrin wayn ama xirida ganacsiga. Taas waxaa kamid ah inaan kaacaawino inaad kudhaqanto sharciyada federaalka ee laxariira shaqo kacayrinta balaaran, waxaan adeegyo kaladuwan ugu keenaynaa shaqaalahaaga goobtooda shaqada, oo xataa waxaan soo jeedinaynaa xalal kale oo kuwaaga kaduwan.
Hormarinta ganacsiga—Waxan ubadalaynaa qorshahaaga ganacsiga mid dhab ah anagoo kaacaawinayna inaad balaariso ganacsi horay ujiray, inaad kasoo guurto gobal kale, ama aad ubaahan tahay tilmaan dhanka sharciga iyo fasaxa ganacsiga ah si aad ganacsi iskudhafan ubiloowdo, balaarinta ganacsiga ama meel kale uwareejinta ganacsiga.
Shaqaalaysiinta halgamayaasha—Waxaan kaacaawin karnaa inaad qorato aadna shaqaalaysiiso dadka dalkeena usoo halgamay, oo ah shaqaale xirfad sare leh oo ukeeni kara qiimo badan, hogaamin iyo iskuxirnaanta shaqalaaha goobtaada shaqo.
IIMAYNADA SUUQA SHAQAALAHA EE HEER GOBAL
AAWIMAADA SHAQO KACAYRINTA WAKIILADA HORMARINTA GANACSIGA
DADKA CIIDANKA KASOO SHAQEEYAY SHAQADA
GOBALKA OO DHAN
Deaf and Hard of Hearing (Dhagoolka iyo Dadka Maqalka Culus):
Services for the Blind (Adeegyada dadka Indhoolka ah):
Business Development Office (Xafiiska Hormarinta Ganacsiga)